Ogige Ndị Gbara Ọsọ Ndụ nke UNICEF Azraq na Jordan na-enweta enyemaka site na Central Hotels COO
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Ogige Ndị Gbara Ọsọ Ndụ nke UNICEF Azraq na Jordan na-enweta enyemaka site na Central Hotels COO
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa na Jordan • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụlọ nkwari akụ-UNICEF-Azraq-02
Ga n'ihu na mmekorita Central Hotels na UNICEF, Abdulla Al Abdulla, Chief Operator Officer (COO) nke Central Hotels na onye otu UNICEF Gulf Area Office Leadership Circle of Champions for Children and Young People, sonyeere ndị nnọchi anya UNICEF na Azraq Camp.
Azraq bụ ebe obibi nke ndị gbara ọsọ ndụ Syria 40,615 nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 22 pasent nọ n'okpuru afọ 5. N'ime ngụkọta, pasent 60 bụ ụmụaka, gụnyere narị abụọ na iri anọ na-esonyeghị ma ọ bụ kewapụ ụmụaka. UNICEF na-arụkọ ọrụ na Ministụ nke Mmụta maka inye ụmụ akwụkwọ niile nọ na Jọdan ogo, agụmakwụkwọ na gburugburu ebe nchekwa dị mma. N'ihi ya, ọtụtụ puku ụmụ Siria gbara ọsọ ndụ ga-enwe ohere inweta agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ mara mma na ogige ndị gbara ọsọ ndụ Azraq dị ka akụkụ nke nkwado UNICEF na Gọọmenti nke Jọdan iji nweta klaasị KG240 na Jordan site na 2.
Maazị Abdulla kwuru, “Anyị kpebisiri ike ịkwado nnukwu ebumnuche UNICEF iji 'Mee mgbanwe na ndụ nwatakịrị'. Ogige Azraq bụ atụmatụ ebumpụta ụwa pụtara ìhè ebe UNICEF na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị iche iche na-arụ ọrụ dị egwu. Ọbịbịa anyị bịara n'ogige ahụ emewo ka anyị nwee nzube ọhụrụ. Childrenmụaka bụ akụnụba anyị kachasị na Central Hotels anyị kpebisiri ike karịa ka anyị ga-enyeghachi obodo anyị n'ụzọ ọ bụla anyị nwere ike.
Ndị na-ahụ maka ogige ndị ọbịa na Azraq bụ ndị Syria Refugee Affairs Directorate (SRAD) na UNHCR na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị ọrụ gọọmentị na ndị ọrụ ebere.
c Camp Mee Central onyeisi ndị ọrụ nwa ụmụ gburugburu mmekota obodo Igba ndị nnọchiteanya eme mmụta kasị ukwuu Ọwara home ndi mmadu Gụnyere ụzọ sonyeere Jọdan ụmụaka ochichi mmụta ndụ so ozi Mr fọrọ nke nta ụlọ ọrụ onye nlekọta arụ ọrụ òtù pụtara ìhè mmekọ nzube àgwà gbara ọsọ ndụ mma kwuru akwado Ozi ọtụtụ puku mkpokọta UNICEF ụzọ ọrụ -eto eto